အောက်ပါအကြောင်းအရာမှန်/မမှန် ပြန်ပြောပေးပါ မခိုင်ဇာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အောက်ပါအကြောင်းအရာမှန်/မမှန် ပြန်ပြောပေးပါ မခိုင်ဇာ
အောက်ပါအကြောင်းအရာမှန်/မမှန် ပြန်ပြောပေးပါ မခိုင်ဇာ
Posted by nicolus agral on Apr 20, 2013 in Copy/Paste, Facebook | 25 comments
***မွတ်စလင်နှင့် လက်ထပ်ခွင့် မပြုသောနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြသောနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) စင်ကာပူ***
‘ဒီနှစ်တန်ခူးအတာကူးပြီးလို့ နှစ်သစ်ရောက်ရင် ဒို့တိုင်းပြည်ကြီး တိုးတက်တော့မယ်’ လို့ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး မိန့်ကြားထားတာကြောင့် နှစ်သစ်ကို မျှော်လင့်ချက်အသစ်တွေနဲ့ ယုံကြည်စွာ စောင့်မျှော်နေမိပါတယ်။ နှစ်ဟောင်းကုန်ခါနီး မှာတော့ မိတ္ထီလာအရေးအခင်းက စခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းနဲ့ ပဲခူးတစ်ဝိုက်က အရေးအခင်းတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ကဲ့ရဲ့စရာ အဖြစ်မျိုးတွေတော့ ကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကပဲ ဖြေရှင်းကြဖို့ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းကြတာကြောင့် ”တကယ်ပဲ လက်ရှိဥပဒေတွေအတိုင်းဖြေရှင်းရင် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စတွေအားလုံးပြေလည်သွားမလား၊ လက်ရှိဥပဒေတွေက ကိုယ့်တိုင်းရင်းသူတွေကို တကယ်ပဲ ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ် နိုင်သလား၊ မွတ်တွေရဲ့ လူမျိုတိုက်စစ်ကြီးကို ကာကွယ်နိုင်ရဲ့လား” လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ တကယ်လို့ လူမျိုတိုက်စစ်ကြီးကို မကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေအသစ်တွေကို အခြေခံဥပဒေတွေပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း နှင့် အတူ ပြင်သင့်တာပြင်၊ အသစ်ရေးသင့်တာကိုရေးပြီး ပြဋ္ဌာန်းကြဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လိုပဲ မွတ်စလင်တွေနဲ့ အတူနေရပါလျက်နဲ့ မွတ်တွေဝါးမျိုတာကို မခံရတဲ့ စင်ကာပူဟာ ဘယ်လိုအစီအမံတွေကြောင့်လဲ ဆိုတာကို ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ စင်ကာပူမှာ မွတ်စလင်နဲ့ အခြားဘာသာဝင်တွေကို လက်ထပ်ခွင့် ပေးမထားပါဘူး။ စင်ကာပူမှာ လက်ထပ်မော်ကွန်းရုံးကြီး ၂ ရုံးရှိပါတယ်။
(၁) လက်ထပ်မော်ကွန်းရုံး Registry of Marriages (ROM) [http://app.rom.gov.sg/index.asp]
ပထမ ROM လက်ထပ်မော်ကွန်းရုံးက မွတ်စလင်မှ လွဲလို့ အခြားသော ဘာသာဝင်တွေအားလုံးကို လွတ်လပ်စွာ လက်ထပ်ပေးတဲ့ တရားရုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အချင်းချင်းသော်လည်းကောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ခရစ်ယာန်သော်လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်နဲ့ ဟိန္ဒူကိုသော်လည်းကောင်း … ကျန်ဘာသာတွေအားလုံး လွတ်လွတ်လပ်လပ် လက်ထပ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ Women’s Charter [http://www.scwo.org.sg/index.php/resources ] အတိုင်းဆောင်ရွက်ကာ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ဥပဒေကို ပြဌာန်းတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ အခြားဘာသာဝင်အားလုံး တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ပဲ ကျင့်သုံးခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတရားရုံးမှာ လက်ထပ်မယ်ဆိုရင် မိမိဟာ မွတ်စလင်မဟုတ်ကြောင်း ထွက်ဆိုရပါတယ်။ မောင်နှံ နှစ်ယောက်စလုံး တစ်ယောက်မှ မွတ်ဖြစ်လို့ မရပါဘူး။ မွတ်အ၀င် မခံဘူးလို့ အလွယ်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒုတိယ ROMM မွတ်စလင်လက်ထပ်မော်ကွန်းရုံးကတော့ မွတ်စလင်အချင်းချင်းကိုပဲ လက်ထပ်ပေးပါတယ်။ အခြားဘာသာဝင်အမျိုးသမီး ခေါ်လာလို့ မရဘူးပေါ့ဗျာ။ (ဒီလင့်မှာလည်း [http://en.wikipedia.org/wiki/Matrimonial_law_of_Singapore] လေ့လာနိုင်ပါတယ်။)
ဒါဆိုရင် .. ဆိုပါတော့ .. မွတ်တစ်ယောက်က ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ .. ? အဖြေက ‘လက်ထပ်ခွင့် မရှိ’တဲ့.. ။ ဒါကိုမှ လက်ထပ်ချင်ရင် နည်း ၂ နည်းတော့ ရှိပါတယ်။
.. ဟာ … ဒါဆိုဘာထူးမှာလဲကွာ .. မွတ်က ဗုဒ္ဓုဘာသာအမျိုးသမီးကို မွတ်ဘာသာထဲ ၀င်ခိုင်းပြီး လက်ထပ်မှာပေါ့ကွာ လို့ စောဒကတက်နိုင်ပါတယ်။ .. ဒီလိုရှိပါတယ် ..။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ ကျတော့ မွတ်က မြန်မာမ တစ်ယောက်ကို ”လူကိုပဲယူပါ။ ယူပြီး မင်းလည်းမင်းဘာသာကို ကိုးကွယ်၊ ငါလည်းငါ့ဘာသာကို ဆက်ကိုးကွယ်မယ်” ဆိုပြီး လက်ထပ်ပါတယ်။ ယူပြီးနည်းနည်းကြာမှ နည်းမျိုးစုံးသုံးပြီး မွတ်ဘာသာထဲ ၀င်ခိုင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီအချိန်မှာ နှိပ်စက်ရင် တရားရုံးမှာ တိုင်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် … ဒီအခြေအနေရောက်မှတော့ တိုင်ပါတော့မလား …။ တိုင်လိုက်လို့ ဖမ်းပြီဆိုရင်တောင် သူ့ရဲ့ ပကတိအပျိုစင်ဘ၀ကို ပြန်ရပါဦးမလား? ဒီတော့ ဒီအခြေအနေရောက်မှတော့ မတိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ… သူတို့ဘာသာထဲပဲ ၀င်လိုက်တော့တာပေါ့။ တကယ်တော့ မွတ်စလင်အမျိုးသား တစ်ယောက်က သူ့အမျိုးသမီးက အခြားဘာသာ ဖြစ်နေရင် မွတ်ဘာသာထဲကို ရအောင်သွတ်သွင်းရပါတယ် .. မသွင်းနိုင်ရင် သူဟာတာဝန်မကျေဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒီသဘောကို ကောင်းကောင်းနောကြေတဲ့ စင်ကာပူသားတွေက လိမ်ယူပြီး သူတို့အိမ်ရောက်မှ ဘာသာပြောင်းခိုင်းမယ့် အစား အစကတည်းက ရအောင်ပြောင်းခိုင်းနိုင်မှ ယူခွင့်ပြုပါတယ်။ … မယူခင်ဘာသာပြောင်းခိုင်းဖို့ ဆိုတာကြတော့ မွတ်အိမ်ထဲရောက်မှ ဘာသာပြောင်းခိုင်းရတာလောက်မလွယ်တော့ဘူးဗျ။ မိန်းကလေးဘက်က အလိုလိုနေရင်းစဉ်းစားစရာပိုများသွားစေပါတယ်။ လူလည်းယူရမယ်? .. ဘာသာလည်းပြောင်းရမယ်? ။ ဒီလိုဆိုတော့ မိဘတွေ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေဘက်ကလည်း ပိုအချိန်ရသွားတာပေါ့ဗျာ။ ဒါကို အချိန်ဆွဲနိုင်ဖို့ စင်ကာပူသားတွေက ဒီနေရာမှာ တစ်ဆင့်ခံထားပြန်သေးသဗျ။ ဘာသာပြောင်းမယ်ဆိုရင်တောင် ချက်ချင်းပြောင်းလို့ မရဘူး။ အခြေခံ မွတ်ဘာသာသင်တန်းတွေ .. ဘာတွေတက်ခိုင်းသေးတယ် .. အဓိပ္ပါယ်က သူတို့ဘာသာကို အသေအချာမြည်းကြည့်ပြီး၊ ပြန်စဉ်းစားပြီးမှ၊ ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ သေသေချာချာနှိုင်းယှဉ် စဉ်စားပြီးမှ ၀င်ပါဆိုတဲ့ သဘောပါ။ .. ဒီမှာတင် သတို့သမီးတစ်ချို့က ပြန်စိတ်ပြောင်းသွားတာပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ ဒီမှာလို သူတို့ဘာသာထဲ မ၀င်ဝင်အောင်ရိုက်နှက်ရတာတို့၊ ဘုရားပုံတော်ကို နင်းပြီး ပြောင်းခိုင်းရတာတို့ ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ စင်ကာပူမှာ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ဘာသာကို စွန့်ခွာပြီး မွတ်ဘာသာကို ပြောင်းကာ မွတ်ကုလားနဲ့ သွားလက်ထပ်တယ်ဆိုတဲ့ စင်ကာပူ ဗုဒ္ဓုဘာသာအမျိုးသမီး အရေအတွက်ဟာ အင်မတန်နည်းပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ဥပဒေကြောင့် အပြင် နဂိုကတည်းက လူမျိုး၊ ဘာသာချစ်စိတ်အခြေခံကောင်းတဲ့ စင်ကာပူ တရုတ်အမျိုးသမီးတွေကိုလည်း ချီးကျူးရမှာပေါ့ဗျာ။ မွတ်တစ်ချို့ကတော့ အမျိုးသမီးကို စည်းရုံးလို့ မရတဲ့အခါမှာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အခြားဘာသာပါလို့ လိမ်ညာပြီး ROM လက်ထပ်ရုံးမှာ လက်ထပ်တာရှိပါတယ်။ .. ဒါဆိုကော ဘာထူးသေးလဲကွာ .. ဆိုရင် .. မတူတဲ့ အချက်က အဲဒီအမျိုးသမီးကို မွတ်ဘာသာထဲ ၀င်ခိုင်းလို့ မရတော့ပါဘူး။ အတင်းအကြပ်ဝင်ခိုင်းခဲ့ရင် သူ့ကိုယ်သူ အခြားဘာသာပါလို့ ရုံးတော်မှာလိမ်ငြာထွက်ဆိုတာက တစ်မှု၊ မွတ်ဘာသာထဲကို အတင်းအကြပ်ဝင်ခိုင်းတာက တစ်မှုဆိုတော့ အမှုနှစ်မှု ဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီအပြင် ROM လက်ထပ်ရုံးမှာ လက်ထပ်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ နောက်တစ်ယောက်တော့ လုံးလုံးလျားလျားယူလို့ မရတော့ပါဘူး။ အမွေဆက်ခံမှုတွေက အစ မွတ်ထုံးစံကို လိုက်လို့မရတော့ပါဘူး။
ဒါဆို .. ဟုတ်ပါပြီ .. မွတ်အချင်းချင်း ၄ယောက်ယူပြီး လူနဲ့ မျိုမယ်ဆိုရင်ကော ?? … ဆိုတော့လည်း .. အလွယ်တကူ နောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူလို့ မရအောင် ဥပဒေကို ပညာသားပါပါ ပြဋ္ဌာန်းတားမြစ်ထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ROMM မွတ်စလင်လက်ထပ်မော်ကွန်းရုံးကို MUSLIM LAW ACT နဲ့ အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ မွတ်တွေကို ၄ ယောက်ယူခွင့်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာ … ဒါပေမယ့် တကယ်ယူဖို့ မလွယ်ဘူး။ နောက်တစ်ယောက်ယူချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကို ကျွေးနိုင်လောက်အောင်ချမ်းသာကြောင်း ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အကုန်ပြရပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကို တားလိုက်တာလည်း ဆိုတော့ သာမာန်လူတန်းစားနဲ့ ဆင်းရဲသားမွတ်တွေ နောက်မိန်းမယူခွင့် မရှိဆိုတာကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ တားလိုက်တာပါ။ ယူခွင့်ရှိတဲ့ မွတ်အရေအတွက် အလိုအလျောက်နည်းသွားတာပေါ့ဗျာ။
ဒါဆိုသူဋ္ဌေးမွတ်တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ယူမှာပေါ့ ဆိုပြန်တော့လည်း … ဒီလို ‘ထစ်’ထားပြန်တယ်။ နောက်တစ်ယောက်ယူမယ်ဆိုတာနဲ့ တရားရုံးမှာ လျှောက်ရပါတယ်။ ဒီအခါမှာ တရားရုံးက ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့.. Kadi လို့ ခေါ်တဲ့ အရာရှိက .. ပထမ မိန်းမရော၊ နောက်ယူမယ့် မိန်းမကော နှစ်ယောက်စလုံးကို သီးခြားစီခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး အသေးစိတ် အင်တာဗျုးပါတယ်။ လက်ရှိမိန်းမကို အဓိကမေးတာက နောက်တစ်ယောက်ယူတာကို မင်းသဘောတူရဲ့လား? လက်ခံနိုင်ရဲ့လား? နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာရင် မင်းစိတ်ချမ်းသာမှာ သေချာရဲ့လား ? ခြိမ်းခြောက်ထားလို့ သဘောတူနေရတာလား? ဆိုတာတွေကို ခရေစေ့တွင်းကျ မေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ သူက ‘NO’ ဆိုရင်ယူခွင့် မရှိပါဘူး … ဘယ်လိုလဲ? မွတ်မတွေ သိပ်သဘောထားကြီးမယ်ထင်သလား? ကျွန်မယောက်ျား နောက်မိန်းမတစ်ယောက်ထပ်ယူမှာကို သိပ်ပျော်တာပဲလို့ ဖြေမယ်ထင်သလား? … အိုစမာဘင်လာဒင်ကို ခြေရာခံမိသွားတာဟာ သူ့ရဲ့ ပထမ မယားကြီးရဲ့ သတင်းပေးချက်ကြောင့်ပါလို့ စီအိုင်အေအရာရှိတစ်ဦးက ၀န်ခံ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အငယ်ဆုံးမိန်းမကို ဂရုစိုက်လွန်းတာကို သည်းမခံနိုင်တော့လို့ ကိုယ့်ယောက်ျားကို သတ်မယ့်သူကိုတောင် မိတ်ဖွဲ့နိုင်တာကို ကြည့်လိုက်ရင် မွတ်စလင် အမျိုးသမီးတွေ မယားကြီး၊ မယားငယ်လုပ်ရတာကို မပျော်ပိုက်ကြဘူးဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါကို အသေအချာနားလည်တဲ့ စင်ကာပူသားတွေက မင်းတို့ရဲ့ ‘မယားကြီးရဲ့ သဘောတူလက်ခံမှု’ ရရင် နောက်မိန်းမတစ်ယောက်ထပ်ယူပါ ဆိုတာဟာ ‘မယူနဲ့’ လို့ ပညာသားပါပါ တားထားတဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ဒီလင့်မှာ [http://policy.mofcom.gov.cn/english/flaw!fetch.action?id=bfd32cf9-e1e7-4378-8455-beb6d4f28c16&pager.pageNo=7#934446910-002016] ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ၁၉၆၆ မှာ စတင်ပြီး တင်းကျပ်စွာရေးဆွဲကာ ကျပ်ကျပ်မတ်မတ်ဆောင်ရွက်လိုက်တာ ၁၉၇၀ နဲ့ ၁၉၇၄ အကြားမှာ လက်ထပ်ကြတဲ့ မွတ်အတွဲပေါင်း ၁၃,၁၂၃ မှာ ၃၅ ယောက်ပဲ မိန်းမတစ်ယောက်ထက်ပိုယူပါတော့တယ်။ ယနေ့အခါမှာ တော့ မိန်းမတစ်ယောက်ထက်ပိုယူတဲ့ စင်ကာပူမွတ်စလင်ဆိုတာ မရှိသလောက်တောင် ရှားသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ .. ဟုတ်ပါပြီ .. မိန်းမတစ်ယောက်ယူပြီး ကလေးတစ်ဒါဇင်လောက်မွေးနေရင်ရောလို့ စောဒကတက်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကိုလည်း သမ္မတကြီး လီကွမ်ယုက ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှာ ‘Stop at Two’ ဆိုတဲ့ မူဝါဒကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ မွတ်အပါအ၀င် မိသားစုအားလုံး ကလေး ၂ယောက်ထက်ပို မွေးခွင့်မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုဆိုတော့ မွတ်တွေအနေနဲ့ မိန်းမကလည်း တစ်ယောက်ထက်ပို မယူရ၊ ကလေးကလည်း ၂ယောက်ထက်ပို မယူရဆိုတော့ သူတို့ ရဲ့ လူမျိုစီမံကိန်းကြီး လုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားလေသတည်းပေါ့ဗျာ။ [ယခုအချိန်မှာတော့ စင်ကာပူဟာ ချမ်းသာနေပြီမို့ Stop at two ပေါ်လစီကို ဆက်လက် မကျင့်သုံးတော့ပါဘူး။ ကလေးပြန်မွေးခိုင်းပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လူဦးရေအချိုးကိုတော့ သေသေချာချာ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။] ကျွန်တော့်တို့မြန်မာတော်တော်များများက မွတ်ဆိုရင် ကလေးယူနှုန်းတားခွင့်မရှိလို့ ပဲ သိကြတဲ့သူများပါတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမ ၄ ယောက်ယူသလိုပါပဲ။ တန်းတူထားရင်ယူခွင့်ရှိတယ် လို့ပဲ ပြောထားတာပါ။ ကလေးမွေးတဲ့ကိစ္စလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ သူတို့ဘာသာမှာ ကလေးများများယူတာကို အားပေးတယ်ပဲ ပြောထားပါတယ်။ လုံးဝတားမြစ်ခွင့်မရှိလို့ ပိတ်ပင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အခုအခါမှာ မွတ်စလင်နိုင်ငံ တော်တော်များများမှာ သားဆက်ခြားစီမံကိန်းတွေကို ဆောင်ရွက်လာနေကြပါပြီ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ သားဆက်ခြားစီမံကိန်းအကြောင်း အနည်းငယ် ဝေဖန်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ တစ်မိသားစု ကလေး ဘယ်နှစ်ယောက်လို့ အတိအကျသတ်မှတ်လိုက်ပြီလို့တော့ မကြားမိသေးပါဘူး။ ကျေးရွာတွေမှာ ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေက ရွာသူရွာသားတွေကို သားဆက်ခြားဖို့ နားချကြပါတယ်။ မြန်မာတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ပြောတဲ့စကားကို နားထောင်ကြတဲ့ အတွက် တားဆေးသုံးလာကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မွတ်ရွာတွေမှာကျတော့ သူတို့ဘာသာက မတားခိုင်းဘူးဆိုပြီး သိပ်မသုံးကြပါဘူး။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားကြရင် တစ်ချိန်မှာ မြန်မာတွေနည်းပြီး မွတ်တွေများတဲ့ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်မိသားစု ကလေး ၄ ယောက်ဆို ၄ ယောက် …. စသဖြင့် တိတိကျကျ သတ်မှတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေရဲ့ အပြစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားများအားလုံး သေသေချာချာ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီး တိကျတဲ့ မူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ရှေးယခင်ကာလတွေတုန်းက ‘အိမ်ထောင်၊ သားမွေး’ဆိုတာ လူမှုရေးကိစ္စသက်သက် ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ယခုအခါမှာတော့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးမက တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ပါ သက်ဆိုင်နေပြီဆိုတာကို သတိထားမိဖို့ လိုပါတယ်။
လက်ရှိကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ထွန်းကားလာတဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီအမျိုးသားရေးဝါဒဟာ ၁၉ ရာစုနဲ့ ၂၀ ရာစုမှာ အကြီးအကျယ်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဒီမျိုးချစ်စိတ်တွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက် ဥရောပသားတွေဟာ သူတို့လူမျိုးကောင်းစားဖို့အတွက် ကမ္ဘာကို ကျွန်ပြုခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ ဟစ်တလာလို သိပ်အစွန်ရောက်သူတွေပေါ်လာတော့ ကမ္ဘာစစ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီး ပြာကျခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်ကြီးတွေပြီးတော့မှ ပြန်စဉ်းစားကျတော့ .. အော် မျိုးချစ်စိတ်တွေကြောင့် ငါတို့တွေ စစ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလို့ တွေးမိပြီး မျိုးချစ်စိတ်တွေကို အပြစ်မြင်ကာ ပြန်လျှော့ချကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ သံယောင်မလိုက်မိဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ သူတို့နဲ့က သမိုင်းကြောင်းချင်း မတူပါဘူး။ မြန်မာပြည်ဟာ သီပေါမင်းလက်ထက်မှာ ပါတော်မူတယ်ဆိုပေမယ့် အဓိကတာဝန်ရှိတာ မင်းတုန်းမင်းပါ။ သူလက်ထက်မှာ ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်ရပေမယ့် တရားဝင်မိဖုရား ၆၀ အပြင် မောင်းမမိဿံ၊ မိဖုရားငယ်အပါအ၀င် မိန်းမ ၁၀၀ ကျော်နဲ့ အပျော်ကျုးနေတော့ တိုင်းပြည်အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ သတိမရနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ မင်းတုန်းမင်းသာ ကနောင်မင်းသားကြီး တစ်ဝက်လောက် တိုင်းပြည်အတွက် စိတ်ဝင်စားခဲ့ရင်၊ အမျိုးသားရေး ပေါ့ပေါ့မတွေးခဲ့ရင် သီပေါလို အရည်အချင်းမရှိသူ ဘုရင်တက်ဖြစ်ပြီး ပါတော်မမူနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ လက်နက်ချင်းကွာလို့သက်သက် ရှုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။ [သီပေါမင်းသား ၁၆ နှစ်မှာ မင်းဖြစ်သလို အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ချူလာလောင်ကောင် မင်းသားဟာ အသက် ၁၄နှစ် နဲ့ သီပေါဘုရင်နဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာ ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်ကို အပြည့်အ၀စိတ်ဝင်စားပြီး အသေအချာ ဥာဏ်ကစားနိုင်ခဲ့တော့ ပြင်သစ်လက်ကလွတ်သလို အဂ๎လိပ်လက်ကလည်း လွတ်ခဲ့ပါတယ်။] ဒီတော့ ဥရောပသားတို့က မျိုးချစ်စိတ်ပြင်ထန်ခဲ့လို့ နယ်ချဲ့တွေဖြစ်ခဲ့ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့က အမျိုးသားရေးပေါ့ပေါ့တွေးခဲ့ကြလို့ သူ့ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဗိုလ်မင်းရောင်တို့၊ ၀န်းသိုစော်ဘွားကြီးတို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘွားတွေသာ ‘မဟာလူသားဆန်ဝါဒ’ ကျင့်သုံးပြီး British လည်းလူပဲ၊ မြန်မာလည်းလူပဲ .. လူ လူချင်းအုပ်ချုပ်တာ အရေးမကြီးဘူးလို့ တွေးခဲ့ကြရင် ကျွန်တော်တို့ အခုထိတောင် လွတ်လပ်ရေး ရဦးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဥရောပသားတွေအတွက် မျိုးချစ်စိတ်ဟာ အဆိပ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ကတော့ ဆေးလို့ပဲ ယုံကြည်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့တတွေက မျိုးချစ်စိတ်များလွန်းနေတာ ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့တတွေက နည်းလွန်းနေတာပါ။ ဒီနေရာမှာ ဆရာတော်များက အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်များ မွေးကြဖို့၊ ကိုယ့်လူမျိုး၊ ဘာသာဝင်အချင်းချင်းချစ်ကြဖို့ ဆုံးမတာကို ခါးခါးသီးသီး ဖြစ်ကြတဲ့ မြန်မာတွေကို တွေ့လို့ အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ပြောဆိုသူတွေကိုချည်းပဲ အံ့သြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့ နားမှာ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာကို အင်မတန်စိမ်းနေကြတာကို တွေ့မိလို့ပါ။ (အစွန်းရောက် မျက်ကန်းမျိုးချစ်မျိုးကို အားမပေးသလို ကောက်ရိုးမီး မျိုးချစ်စိတ်မျိုးကိုလည်း အားမပေးပါ။) မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တစ်နိုင်ငံတည်းများ ကွက်ပြီး ပျောက်ဆုံးနေသလားလို့တောင် စဉ်းစားမိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘာသာခြား၊ လူမျိုးခြား တော်တော်များများဟာ ကလေးဘ၀ကတည်းက ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်ကြဖို့၊ စည်းလုံးကြဖို့ သွန်သင်ခံခဲ့ကြရပါတယ်။ သူတို့လူမျိုးသူတို့ ချစ်ရမယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူကမှ ကြီးလာမှ တစ်ကူးတစ်က ထပ်ပြီးသင်နေစရာ မလိုအောင်ကို သိကြပါတယ်။ စင်ကာပူမှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ စင်ကာပူ တရုတ်အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ နဲ့လူမျိုးတူ၊ ဘာသာတူတွေကို ပဲ ယူကြတာများပါတယ်။
သေသေချာချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် စင်ကာပူဆိုတာ မြို့သေးသေးလေးပါဗျာ။ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားလို မွတ်စလင်နိုင်ငံကြီး ၂ နိုင်ငံရဲ့ အလယ်နားမှာ နေရတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ပါ။ ‘မွတ်စလင်ပတ်လည် ၀န်းရံနေသောမြို့ကို စင်ကာပူဟုခေါ်သည်’ လို့တောင် ပြောလို့ ရပါတယ်။ တကယ်လို့များ …
– စင်ကာပူသားတွေသာ သူတို့ခြံစည်းရိုးကို အသေအချာမကာရံခဲ့ကြရင် …
– စင်ကာပူအစိုးရကသာ မွတ်တွေရဲ့ မျိုးပွားနှုန်းထိမ်းချုပ်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ပညာသားပါပါ မပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့ရင် …
– စင်ကာပူတရုတ်အမျိုးသမီးတွေသာ လင်ယူပက်စက်ခဲ့ကြရင် …
……. ”Islamic Republic of Singapore” ဆိုတဲ့ နိုင်ငံသစ်တစ်နိုင်ငံဟာ ဒီကမ္ဘာမြေမှာ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာ အတော်လေးတောင်ကြာနေလောက်ပါပြီ။ စင်ကာပူမှာ လက်ရှိမွတ်စလင် ၁၅ % ရှိပါတယ်။ ၁၉၆၅ မှာ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့တဲ့ စင်ကာပူဟာ လွတ်လပ်ရေးရခါစတုန်းကလည်း မွတ်စလင် ၁၅% ၊ အခုလည်း ၁၅% ပါ။ မွတ်ရာခိုင်နှုန်းတွေလုံးဝ တိုးမလာပါဘူး။ စင်ကာပူသားတွေဟာ အခုလိုကမ္ဘာကတောင် လေးစားရအောင် ချမ်းသာကြီးပွားတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရုံမက မွတ်စလင်တွေရဲ့ လူမျိုတိုက်စစ်အောက်မှာ ၀ါးမျိုမှုကို မခံခဲ့ကြရဘူးဆိုတာဟာ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူ လက်တွဲညီညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လို့ပါ။ အစိုးရက လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းကာကွယ်နေချိန်မှာ ပြည်သူတွေကလည်း ကိုယ့်လူမျိုးတူ၊ ဘာသာတူချင်းအားပေးခဲ့ကြ၊ လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ မကွယ်ပျောက်ရလေအောင် ပြည်သူပြည်သားတွေဘက်ကလည်း အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်တွေ ပြန်လည်နိုးကြားကြဖို့ လိုသလို အစိုးရအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ရေရှည်တည်တံ့အောင် ထိမ်းသိမ်းကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် လက်တွေ့ကျတဲ့ ဥပဒေအသစ်တွေ ပြဌာန်းပေးနိုင်ပါစေလို့ နှစ်သစ်ဦးမှာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလုိုက်ရပါတယ်။
ခင်ဗျား ရေးမှ စင်ကာပူအကြောင်း သိရပါတယ်
စင်ကာပူ နိုင်ငံကို အဲဒီလို စည်းကမ်းမျိုးစထုတ်ခဲ့တဲ့ လူတွေနဲ့ ၊ လိုက်နာကြတဲ့ နိုင်ငံသားအားလုံးကို လေးစားအားကျမိပါတယ်
ဟယ် .. အပျိုကြီးကို ဘာတွေ သွားမေးနေတာ တုန်း .. :hee:
အဲ့ဒီ့လောက် အထိတော့ သတိ မထားမိခဲ့ဘူး ..
၁၉၉၀ ၀န်းကျင်က တော့ စကာင်္ပူသားကို ယူတဲ့ နိုင်ငံခြားသူ အမျိုးသမီးက စကာင်္ပူ မှာ နေခွင့် ရ ။ စကာင်္ပူနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ အခွင့် အရေးရပေမဲ့ .. စကာင်္ပူ မ က နိုင်ငံခြားသားကို ယူရင် အဲ့ဒီ့ နိုင်ငံခြားသား က စကာင်္ပူ နိုင်ငံသား မဖြစ်ပါဘူး ။ နေခွင့် မပေးပါဘူး ။
နောက် စကာင်္ပူ မြေပေါ်မှာ မွေးသော်ငြားလည်း အဖေ အမေ နိုင်ငံခြားသားဆိုရင် စကာင်္ပူသား အဖြစ် မပေးပါဘူး ..
ကလေး Stop at Two က နှစ်ယောက်ဘဲ ယူရမယ် လို့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ တိုက်တွန်းချက်ပါ။
Two is enough ဆိုပြီး ကောင်လေး တစ်ယောက်နဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက် ထီးလေး မိုးပြီး မိုးရွာထဲမှာ ရပ်နေတဲ့ ပုံလေးနဲ့ တိုက်တွန်းချက်တွေကို နေရာအနှံ့ မှာ ပိုစတာလေးတွေ ထောင်ထားတာ မှတ်မိခဲ့ပါသည် ။
နှစ်ယောက်ထက်ပိုယူ ရင် ပညာသင်စားရိတ် ။ မွေးစားရိတ် တွေ တင်ထားပါတယ် ။ ကိုယ်တတ်နိုင်ရင် သုံးယောက်ယူလည်း ရ ။ လေးယောက် ယူလည်း ရပါတယ် ။
တရုတ်မ တွေ က လိုက်နာပေမဲ့ မလေး မ တွေ က မလိုက်နာလို့ တရုတ်ဦးရေ ကျဆင်းခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒါကြောင့် တရုတ်ပြည်မကြီးကနေ တရုတ်တွေ ခေါ်သွင်းပြီး နိုင်ငံသားပေးဖို့ ဂိုချောက်တောင်တို့ လက်ထက်မှာ ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ် ။ နောက် ကလေး များများ မွေးဖို့ ပါ ပြန်တိုက်တွန်းရပြီး သုံးယောက်မြောက် ကလေး မှာ ပညာသင်စားရိတ် ချပေးတာတွေ ၊ မွေးဖွားစားရိတ် ပေးတာတွေ နဲ့ ပြန်စွဲဆောင်ရ ရှာပါတယ်။
၁၉၉၆ နောက်ပိုင်းတော့ မသိတော့ဘူးနော် ..
ဘယ်နဲ့ ခေါင်းစဉ်က ကျုပ်နာမည်ကြီးတွေ့ ပြီး မူးနေတာဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိ။
ခုတော့ ပြောဖို့ အစဉ်မပြေသေးလို့။
ပို့စ်ပိုင်ရှင် ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ဒီစာသားလေးတွေကို လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးချင်တယ်…….
မွေးရာပါ intel ကပုတာကိုး
ပို့စ်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ဆန့်ကျင်သလိုလုပ်ပြီး မန်းရတဲ့သဘောအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျား
( ဆန့်ကျင်တယ်လို့ သဘောမထားဘို့ မေတ္တာရပ်ပါပြီး ဆိုလိုရင်းကို ဆက်သွားကြစေလိုပါတယ် )
ယနေ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အဓိက ပြဿနာမှာ ရေမြေခြားက လာတဲ့ မွတ်တွေကို
မြန်ပြည်သားမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ လဝက တွေဟာ သီခြား လွတ်ထွက်နေသလိုရှိနေတယ်
အနှီး ကိစ္စ ( အကြံအဖန်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖေးထုတ်ဖို့ ) အားစိုက်ကြဘို့
မှတ်ချက်။ ။ ကျုပ်ရဲ့ ကော်မန့်နဲ့ ပိုစ့်ရဲ့ ဆိုလိုရင်း မကိုက်ညီခြင်းအတွက်
ကို မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ရဲ့ ။
ပထမပြောချင်တာက.. မွတ်ဆလင်ဆိုတာ.. အစ္စလမ်ဘာသာ(သာသနာ)ကိုးကွယ်သူ.. လူကိုခေါ်တာပါ..
ဒုတိယပြောချင်တာက.. မွတ်ဆလင်တွေကို.. မွတ်လို့မခေါ်သင့်ပါ..။
ဒါက.. Discrimination ပါပဲ..။ ရေးရင်း..လူမျိုးရေးအမုန်းတရားဖြစ်လာအောင်ဖက်ကို ချွန်တွန်းလုပ်ထားတယ်လို့.. မြင်ပါတယ်..။
မြန်မာတွေ (တော်တော်များများ) စကားလုံးတွေနဲ့..အရမ်း..အရမ်းရန်ဖြစ်တာပဲ..
လူမျိုး..နိုင်ငံ..နိုင်ငံသားလည်း… မကွဲ..။ အမျိုး.. ဘာသာ..သာသနာလည်း.. မသေချာ..
အဲလိုလုပ်လို့.. ရခိုင်ပြည်.. ရခိုင်တွေပိုင်တယ်ဖြစ်.. ကချင်ပြည်ကချင်တွေပိုင်တယ်ဖြစ်ကုန်ပြီ…
ရေးသူဟာ.. ကိုယ့်အခွင့်အရေး..သူ့အခွင့်အရေး.. နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး.. လူသားအခွင့်အရေးတွေဘောင်ကျော်နေတယ်မှတ်ပါတယ်..။
အဓိကအားဖြင့်.. အမျိုးသမီးတွေကို.. ယောကျာ်းတွေနဲ့တန်းတူမစဉ်းစားပဲ.. ခွဲခြားဆက်ဆံရေးထားပါတယ်..
ချုံပြောရရင်.. စာရေးသူဆိုလိုချင်ဟန်ရှိတဲ.့.. မြန်မာ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားဥပဒေတွေ.. နိုင်ငံသားဥပဒေတွေ ပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ထောက်ခံပါတယ်..
မြန်မာ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားဥပဒေ..ဓလေ့တွေက.. အင်မတန်ရှုပ်ပါတယ်..။ .. မိန်းမ ၁-၂-၃ယောက်မကယူလို့ရနေပြီး.. ပုဆိုးတန်းတင်အကြင်လင်မယားဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်..။
နိုင်ငံသားဥပဒေကလည်း.. ဦးနေ၀င်းဇတ်လမ်းရှုပ်သွားသမို့.. မိုဒယ်အောက်.. ခေတ်နဲမညီ… ကမ္ဘာ့အလယ်ရှက်ဖွယ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်..
ကျုပ်နားလည်သလောက်.. မွတ်ဆလင်တွေ မိန်းမတယောက်မကယူလို့ရတာ.. ဘယ်ကဖြစ်လာတလည်း သိဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်.
သမိုင်းအရ.. ခရုးဆိတ်စစ်ပွဲမှာ.. ဂျူးတွေသစ္စာဖေါက်လို့.. စစ်တပ်ကြီးတခုကျသွားပြီးနောက် ကျန်ရစ်သူမုဆိုးမမိန်းမတွေကို.. စောင့်ရှောက်ဖို့.. ခွင့်ပေးရာကဖြစ်လာတယ်လို့သိထားပါတယ်..(မှားရင်ပြင်ပါ)
ဒီခေတ်ရောက်တော့.. အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ.. ရေနံကရတဲ့ငွေတွေနဲ့.. နိုင်ငံသားအာရပ်တွေချမ်းသာလာတော့.. (ကျွေးနိုင်တာနဲ့) မိန်းမတွေထိုင်သိမ်းနေရင်.. အခုလိုထုံးစံလို့ထင်ကုန်တာ.. ဖြစ်ကုန်တာလို့.. ထင်မိပါတယ်..
အစ္စလမ်ဘာသာရေးလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာ.. မကျွေးနိုင်ပဲ အပိုမယူရပါ..။ (မှားရင်ပြင်ပါ)
ငွေရှိပြီးကျွေးနိုင်ရင်.. မိန်းမတယောက်မကယူနိုင်တာ.. မွတ်ဆလင်မှမဟုတ်.. ယောက်ျားတိုင်းလိုချင်တာကြီးလို့.. ထင်ပါတယ်..
ဒါက.. မိန်းမတွေအပေါ်မတရားရာကျမှာမို့.. ဥပဒေနဲ့ပိတ်သင့်ပါတယ်..
ကိုးကွယ်ရာပြောင်းကြတာကတော့.. လူသားတယောက်သူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူ.. ပြောင်းချင်ပြောင်းစေသတည်းပါပဲ..
ဘေးလူက.. ဆွေမျိုးတွေက.. မိတ်ဆွေတွေက.. အတင်းအကြပ်.. ဟိုဟာကိုးကါယ်..ဒီဟာဆည်းကပ်လုပ်ခွင့်မရှိရေးချ.. မရှိပါ..။
ဘယ်လိုလုပ်လုပ်… ဘာလုပ်လုပ်.. နောင်အနှစ်၅၀လောက်ဆို..(လွန်ရော နှစ်၁၀၀) ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားအားလုံး.. ကြွမှာပဲ.. :harr:
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးမှာ ကျုပ်ကို နာမည်တတ်မေးထားတာကြီးပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ဒီ ဟာတွေထဲ ဘယ်လို ပါ မိပါလိမ့် စဉ်းစားမိသွားတယ်။
ဪ…. နောက်တော့ စလုံး က “လော” ကို “ဒါ ဟုတ်သလား” လို့ မေးတဲ့ ပုံစံမို့ ဟင်းးး ချလိုက်ပါရဲ့။
ဘာမှမသိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖတ်မိခါစ ဆို မိဆွိ ဘာတွေ ရှုပ်ထားပြန်ပြီလဲမှတ်ဦးမှာ။
အဖြေမတတ်ရင်လည်း ၂ ဘက်လုံးက ဆဲ ခံ ထိမဲ့ ကိန်းကိုး။ ကျုပ် ဖဘ အကောင့်မှန်သမျှကလည်း အကုန် နာမည်ရင်းနဲ့ အင်ဖို အမှန်တွေ ချည်းပဲ။
မောင်ဂီ စကား ယူသုံးရရင် “ဒါမျိုးမကြောက်လို့ ရွာရိုးလျှောက်နေတာပါ။”
တားတဲ့လူတွေက လည်း “ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တာဆို ပြောမနေနဲ့တော့” လို့ တားပါရဲ့။
နာမည် တည့်တည့် တတ်မေးတာကို ရှောင်ရရင် သွေးနည်းရာကျသကိုး။
အမှန်တော့ ဒါမျိုးတွေ မပြောချင်လို့ ဆက်စပ်ပို့(စ) တွေ ဆို ဝင်ကို မရေး ဝင်ကို မမန့်တာ။။
လူအများစု က စာဖတ်ရင် အစွဲနဲ့ဖတ်ကြလွန်းလို့ပါ။
ကိုယ့်ကို မထောက်ခံရင် ကိုယ့်ရန်သူဖြစ်သွားတတ်စမြဲမို့ ကျုပ်က ရန်သူမမွေးချင်သေးပါ။
တခုပဲ ခက်တာက … ပို့(စ) ပါ အချက်အလက်အကုန်ကိုတော့ မှန်တယ်၊ မှားတယ် မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေ။
ကျုပ်ကိုယ်တိုင်က စလုံး လော ကို အရည်ကျိုသောက်ထားတဲ့လူ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့၊ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တာလောက်သာ ရှာထားဖွေထားတာကိုး။
ဆိုတော့ သိသလောက်ကိုပဲ ပြောပါ့မယ်။
– စလုံးမှာ လက်ထပ်ရုံး ၂ ခုရှိတာတော့ ဟုတ်၏။
– ဘာတွေ ဘယ်လို Rules and Regulations တွေကိုတော့ လင့် မှာပဲ သွားဖတ်စေချင်၏။
– ဖတ်ပြီး အသေးစိတ်ပြောရအောင်တော့ ကျုပ်မအား၊
– နောက် စလုံး အစိုးရရဲ့ ဥပဒေက အမြဲတမ်း သူ့နိုင်ငံသားကို နည်းနည်းပို အကာအကွယ်ပေးတာမှန်သော်လည်း သူ့ဥပဒေက ဘယ်ဘာသာ၊လူမျိုးကိုမှ သိပ်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိ။
– ဒါက အစိုးရဥပဒေတွေအနေနဲ့ပြောတာပါ။ လူလူချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ ကိစ္စတွေကတော့ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ အတွက် တစ်ဦးချင်းတာဝန်ယူရမဲ့ အပိုင်းတွေဖြစ်သွားပါပြီ။
– ခုထားထားတဲ့ ဥပဒေမှန်သမျှကလည်း သူ့အိုး သူ့ဆန်တန်တဲ့ ဘယ်သူမှ စောဒက မတက်နိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွန်ပလိန်းတွေတော့လည်း မကြားဖူးပါ။။
– ရှိသမျှ ဝန်ကြီးဌာနတွေက ကိုယ်ပိုင် ဝက်(ဘ) ဆိုက်တွေ၊အချိန်မရွေးခေါ်နိုင်တဲ့ ဟော့(ထ) လိုင်းတွေနဲ့မို့ အကြောင်းအရာမရှင်းတာရှိရင် မေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေချည်းပါ။
– ဘယ်ဥပဒေကို ဘာကြောင့်ထုတ်တယ်ဆိုတာတော့ ဘယ်သူမှ ဖြေနိုင်မယ်မထင်၊ ဘယ်သူကမှလည်း မေးမဲ့ပုံမရှိ။
– ပါးနပ်တဲ့ အစိုးရဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ နေထိုင်တဲ့ လူတွေ သွေးကွဲစေမဲ့၊ ဆူပူစေမဲ့ ဥပဒေမျိုး ရေးဆွဲလေ့မရှိဘူးမှတ်တယ်။ အဲလို အပြုအမူမျိုး ပေါ်မလာအောင်လည်း အစကတည်းက သိသာသိစေ၊ မမြင်စေ ပုံစံမျိုးပဲ ပြဌန်းထားတာထင်ရဲ့။
(ဒါတွေက လူပြိန်းတွေး တွေးကြည့်ရတာပါ။)
– ကျန်တဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ထင်မြင်ချက်တွေတော့ ကျုပ်မပေးနိုင်ပါဘူးရယ်။
– အရင်ကတည်းက ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူ ပုံစံနဲ့ ကြီးပျင်းလာသူမို့ ဘယ်သူဘာလုပ်လုပ် အပြင်းအထန်၊ ပိုးစိုးပက်စက် အပြစ်ပြော၊ ရှုပ်ချ၊ လက်ညှိုးထိုး၊ ဆန့်ကျင်၊ တိုက်ခိုက် လုပ်လေ့မရှိပါ။
– လူတိုင်း ကိုယ့်စည်းကို လုံကြရင် ကိုယ့် ဘာသာရေး၊ ကိုယ့်အတွေးအခေါ်နဲ့ ကိုယ် လုံအောင် ကိုယ်ကိုယ်ကို တစ်ဦးချင်းတာဝန်ယူနိုင်ကြရင် ဒီလို ပြသနာတွေဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပဲ မြင်၏။
– ပြသနာဖြစ်လာရင်လည်း အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တာမို့ အကြောင်းကို ပဲ အရင်ရှာပြီး ပယ်သတ်ရမှာပေါ့။ ဖြစ်သမျှ အကျိုးဆက်တွေ နောက်အရင်လိုက်ရှင်းနေရရင် ဆက်မှားဖို့ပဲ ရှိတာပါပဲ။
– အဲတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမပြူ မိမိမှု မို့၊ ကိုယ့် မနော၊ ဝစီ၊ ကာယ ဤသုံးဝ ကို ကိုယ်ဟာကိုယ် တာဝန်ယူခြင်းသာ အဓိကလို့ပဲ မှတ်ထင်ပါကြောင်း။
လိုချင်တဲ့ အဖြေမရရင်လည်း စိတ်မဆိုးကြနဲ့နော်။ ခွင့်လွှတ်နော်။
နောက် လာငြင်းတဲ့ သူတွေကို လည်း ပြန်ငြင်းမှာ မဟုတ်…..
ရွာထဲမှာကနေလည်း မထွက်ချင်သေး၊ နေပျော်နေသေးလို့ပါ။
by name နဲ့ဆိုတော့ရိုင်းသွားတယ်
စင်္ကပူရ်မှာမျက်နှာကြီး နားကြီးဆိုတော့ သိမလားလို့ပါဗျာ
chat box ကမေးရမှာကို social media မှာသွားတင်မိတယ်
မနေပျော်တော့လို့ သေရမယ်ဆိုလည်း ကျွန်တော်ကတော့ ရွာသင်းချိုင်းမှာပဲခေါင်းချမယ်
စလုံးမှာ ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက်က ပြောထားတာလေး ပြန်ကူးလာတာ..
(((Hein နောက်တစ်ခု က ဒိမှာ racial harmony ဆိုတာရှိတာကိုတယ်ပြီးဦးစားပေးတယ်.. နိုင်ငံလေးသေးတော့..တစ်ခုခုဆို ပြာဖြစ်သွားမှာ သူတို့ နိုင်ငံသားတွေလည်းသိတယ်..အိမ်ယာ တွေဆိုရင် ဒီ တိုက်မှာ တရုတ် ဘယ်နှစ်ယောက် မလေး ဘယ်နှစ်ယောက်ဆို တခြား ဘယ်နှစ်ယောက် ဆိုပြီးသူတို့ အစိုးရ ကခွဲတမ်းချပေးထားတယ်.. အစိုးရအိမ်ယာဝယ် မယ်ဆို ရင် အဒါတွေနဲ့ စီစစ်ပြီးမှာ ၀ယ်ခွင့် ရှိပါသတဲ့ လေ.. နောက်တစ်ခုက .သူတို့ ပိုက်ဆံပဲရှိတာ.. ဘာ အင်းအားမှ မရှိဘူး..ဒိတော့ သူတို့ ရဲ့ကစားနည်း က အားလုံးနဲ့ တည်အောင်ပေါင်းနည်း ပဲ… ဘယ်သူရန်ဖြစ်ဖြစ် ကြားနေပဲ..အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေနေရင်.. ကိုယ်အတွက်တပန်းသာတာပဲ.
Sue Winne လီကွမ်ယု တော်တော် တော်ပါလား..
ဆောင်းပါးရှင် nicolus agral ရေ
ရေးထားတဲ့ပို့စ်က ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့် ရေးတယ်ဆိုတာ သိပ်မသိပေမယ့် ခြုံပြောရရင် ကျနော့် တဦးတည်း အမြင်နဲ့တော့ ကြိုက်မိပါသည်။ သူများရဲ့ အခွင့်အရေးကိုလည်း မတရားသဖြင့် ထိခိုက်တာမျိုး မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်နိုင်ခွင့်ကတော့ ရှိသင့်တယ်ဆိုတာ ထောက်ခံပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ လူလူမျိုး လူဝါဒသမား မဟုတ်ပါ။ အဲဒီလို ပြောတဲ့ လူတွေကိုလည်း ယုံဖို့ ခပ်ခက်ခက်လို့ ထင်သဖြင့် တော်တော်လေး စဉ်းစားတတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါ။
ပြောတဲ့ အချက်လေးတွေကတော့ တော်တော်ကောင်းတယ် ထင်ပါတယ်။ ကျနော့် အကြိုက်ပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကိုးကွယ်တဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်း အမ္မဋ္ဌ ပုဏ္ဏားလုလင်ကို “အမ္မဋ္ဌ ဘီလုံးဌက်တောင် ကိုယ့်အသိုက်ထဲမှာ ကိုယ်အလိုရှိသလို မြည်နိုင်သေးတယ်။ ကပိလဝတ်ဟာ သာကီဝင်တွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြည်ဖြစ်တယ်။” လို့ ဟောဖူးတယ်ဗျ။ ဆိုလိုတာကတော့ဗျာ ကိုယ့်အသိုက်မှာမှ ကိုယ်ကိုကိုယ့် မကာကွယ်ရရင် ဆော်ဒီတို့ အီရန်တို့မှာများ ကာကွယ်ခွင့် ရမှာလား မသိပါဘူး။
တခုတော့ ကျနော် သိပ်သဘောမတူဘူးဗျ။ မြန်မာပြည် အင်္ဂလိပ်လက်အောက် ရောက်ရတာက မင်းတုန်းမင်းကြီးကြောင့် ဆိုတာတော့ သိပ်သဘော မတူဘူးဗျို့။ အဲဒီအချိန်တုန်းက လက်ဦးမှု နောက်ကျခဲ့လို့ပါ။ မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်းတွေ အားလုံး ရန်သူ့လက် ပါသွားခဲ့ပြီ။ အင်္ဂလိပ် အနေနဲ့ ကောင်းကောင်း ခြေကုတ်ရသွားပြီ။ အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာကြီး ဖီလဒင်းဟောက အဲဒီခေတ်က မြန်မာတွေကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းပြီး ပြန်ရေးတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတော့ မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်မှာ မြန်မာလူထုက ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတို့ စီးပွားရေးတို့မှာ ရွှေခေတ်လို့ ပြောကြတယ်ဆိုပဲ။ ကုန်းဘောင်မင်းဆက် အားလုံးထဲမှာတောင် သူ့ကို အကြိုက်ဆုံးဆိုပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့အနေနဲ့ ဘဝသစ် ထူထောင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတော့ အဲဒီအချိန်မှာ မရှိတော့ပါဘူး။ ရန်သူ အင်အားစုတွေ ဝင်လာမယ့် လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ မြန်မာပြည် ရောက်နေခဲ့ပြီ။
မြန်မာတွေ လုပ်တဲ့ စက်မှုတော်လှန်ရေးက ဂျပန်က မေဂျီတော်လှန်ရေးထက်တောင် ၆ နှစ်လောက် စောသေးဆိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ကွာသွားတာက ဂျပန်က အဲဒီအချိန်မှာ ဘာပိုင်နက်မှ မဆုံးရှုံးသေးပေမယ့် မြန်မာတွေကတော့ အောက်မြန်မာပြည်ကြီး တခုလုံး ဆုံးသွားခဲ့ပြီလေ။
ကနောင်မင်းသား အသေမစောရင် ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာ စိတ်ကူးယာဉ်လို့ ကောင်းပေမယ့် သမိုင်းဆိုတာက တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေကိုပဲ စဉ်းစားရတာပဲ။ အဲဒီလို မဖြစ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကတော့ တွေးလို့ပဲ ကောင်းပြီး သမိုင်းထဲမှာ ထည့်လို့မရဘူး ထင်တာပဲ။
ဘာပဲပြောပြော ဆောင်းပါးရှင်ပို့စ်ကို ကြိုက်ကြောင်းပါ။
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူပေါ့ဗျာ ……….။ နိုင်ငံတော်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေရင်းနဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ရင်ဘောင်မတန်းနိုင်တော့တဲ့ ရိုးရာဓလေ့ စရိုက်ဟောင်းတွေကိုပါ ကျွဲကူးရေပါ ပြင်ချင်စိတ်မရှိကြတော့ဘူးလား အဲဒိလိုပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့……………..။
သဂျီးက သဘောထားကျီးမဲ ဆိုဗဲဗျ…. သူက နေရင်းထိုင်ရင်း ဘုန်းကြီး မုန်းနေဒါဂလား…။ အိုဗယ့် နှစ်တထောင်ကျိန်စာ (ပုဂံခေတ်တုန်းက အရည်းကျီးဝင်စားလို့ဗျို့) :hee:
ကိုကြောင်ကြီးပြောတာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ ကျနော်လည်း အဲဒီလိုပဲ ထင်တယ်။
၁။ အစ္စလာမ်က ဘာကြောင့်ယောက်ျားတစ်ဦးက မိန်းမတစ်ဥိးထက်ပိုယူခွင့်ပြုထားရတာလဲ။
အစ္စလာမ်ဘာသာသည် ယောက်ျားတစ်ယောက်အား မိန်းမအများနှင့် လက်ထက်ခွင့် “Poly-gamy” ကို
အမှန်စင်စစ်“Polygamy” ဆိုသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်တင်ွတစ်ယောက်ထက်ပိုသော ကြင်ဖော်များ
ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ “Polygeny” ခေါ် မယားပြိုင်ထားခြင်း
(အမျိုးသားတစ်ယောက်တွင် ဇနီးမယားတစ်ယောက်ထက် ပို၍ရှိခြင်း) နှင့် “Polyendry” ခေါ်
လင်ပြိုင်ထားခြင်း (အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တွင် လင်ယောက်ျား တစ်ယောက်ထက် ပို၍ရှိခြင်း) ဟူ၍ဖြစ် သည်။
များစွာသော လူပုဂ္ဂိုလ်များမှ ‘Polygamy’ ဟူသောစကားရပ်အတွက်`ယောက်ျားတစ်ယောက်မှဇနီး မယား
တစ်ဦးထက်ပို၍ လက်ထပ်နိုင်ခြင်း (၀ါ) မယားပြိုင်ထားခြင်းဟူ၍ ထင်မြင်နေကြသည်။ အမှန်စင်စစ် ထို
သဘောသာမက အမျိုးသမီးတစ်ဦးတွင် တစ်ဦးထက်ပိုသော လင်ယောက်ျား ကြင်ဖော်များရှိခြင်းသည်လည်း အကျုံးဝင်၏။
ယောက်ျားတစ်ဦးသည် ဇနီးတစ်ဦးထက်ပို၍ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကို “Polygeny” ဟုခေါ်ပြီး မိန်းမတစ်ဦး
တွင် ခင်ပွန်းတစ်ဦးထက် ပို၍ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကို “Polyendry” ဟု ခေါ်သည်။ ညီမတော်မှ မေးသော
မေးခွန်းမှာ အဓိကအားဖြင့် `ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို အဘယ်ကြောင့် ဇနီးတစ်ဦးထက်ပို၍ လက်ထပ်ခွင့်ပြု
ရပါသနည်း။´ တစ်နည်းဆိုသော် မယားပြိုင်ထားခြင်း (Polygeny) ကို ဘာကြောင့် အစ္စလာမ်မှ ခွင့်ပြုထားရပါ
သနည်းဟူသော အမေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မှ ဤမေးခွန်းကို ဖြေပါမည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်သည် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ဘာသာရေး ကျမ်းဂန်များအနက် `ဇနီးတစ်ဦးတည်းသာ လက်ထပ်ပါ´ ဟု ဖော်ပြထားသော တစ်အုပ်တည်းသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ဂီတကျမ်း၊
ဝေဒကျမ်း၊ ရာမယနကျမ်း၊ မဟာဘာရတကျမ်း၊ သမ္မာကျမ်းအားလုံးကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ `တစ်ဦးတည်းကိုသာ လက်ထပ်ပါ ´ ဟူ၍ဖော်ပြထားသော နေရာတစ်ေ နရာမျှမရှိပါ။ ကုရ်အာန် ကျမ်းတစ်အုပ်တည်းတွင်သာ `တစ်ဦးတည်းကိုသာ လက်ထပ်ပါ´ဟု ဖော်ပြထားသည်ကို
တွေ့နိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ် သင်သည် ဟိန္ဒူကျမ်းဂန်များကို ဖတ်ရှုလေ့လာပါက များစွာသောဘုရင်များတွင် ဇနီးအများ ရှိသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ဥပမာ – ဘုရင်ဒါရှရတ်တွင် ဇနီးတစ်ဦးထက်ပို၍ရှိသည်။ ခရစ်ရှနာတွင်လည်း ဇနီးတစ်ဦးထက် ပို၍ရှိသည်။ သင်သည် ဂျူးကျမ်းဂန်များကို ဖတ်ရှုကြည့်ပါက ဂျူးဥပဒေ၏ (၁၁) ရာစုတွင် Polygeny
ခေါ် ဇနီးတစ်ဦးထက် ပို၍ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့် ပြုထားကြောင်း တွေ့ရပေမည်။ ရာဘီဂါတ်ဒ်ရွှန် (မ်) ဘင်ဂျာဟူဒါ (Gurdshom Benjahuda) မှ Signord အား တင်ပြပြီး ဇနီးတစ်ဦးထက်ပို၍ လက်ထပ်ခြင်းခွင့်မပြုသင့်ကြောင်း တင်ပြခဲ့သည်။ သို့တိုင်အောင် မွတ်စ်လင်မ် နိုင်ငံများတွင်ရှိသော စက်(ပ်)ထရာနစ် ဂျူးလူ့အဖွဲ့အစည်း (Septranic Jewish Community) တွင် (၁၉၅၀) တိုင်အောင် ကျင့်သုံးမှုရှိခဲ့သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူမှ ဤသို့ကျင့်သုံးမှုအပေါ် တားမြစ်ပိတ်ပင် ခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန် လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း လွန်ခဲ့သော နှစ်ရာစုခန့်ထိ (၁၈ ရာစု) Polygeny ခေါ် `မယားပြိုင်ထားခြင်း’ ကို ခွင့်ပြုကြောင်း သမ္မာကျမ်းတွင် တွေ့နိုင်သည်။ ထိုရာစု နောက်ပိုင်းတွင် `ခရစ်ယာန် အသင်းတော်´ မှ တားမြစ်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ တရားရေး (ဥပဒေရေးရာ) ကို လေ့လာပါက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေသည် ဟိန္ဒူအမျိုးသားများအား ဇနီးတစ်ယောက်ထက်ပို၍ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်ပြုထားကြောင်း
တွေ့ရသည်။ (၁၉၅၄) ခုနှစ်တွင်မှဟိန္ဒူလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု အက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတွင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် တစ်ခု ပါဝင်သည်။ ယင်းမှာ ဟိန္ဒူယောက်ျားများသည် ဇနီးတစ်ဦးထက်ပို၍ လက်ထပ်ခွင့်မပြုဟူသောအချက် ဖြစ်သည်။ “အစ္စလာမ်တွင်ရှိသော အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်အတန်း´
´နှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြသောကော်မတီ၏ (၁၉၇၅)ခုနှစ် စာရင်းဇယားအရ၊ စာမျက်နှာ (၆၆၊ ၆၇) တွင် ဇနီး တစ်ယောက်ထက်ပို၍ လက်ထပ်ထိမ်းမြားသော ရာခိုင်နှုန်းကို တင်ပြထားသည်။ ယင်းထုတ်ပြန်ထားသော စာရင်း၊ ဇယားအရ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ၀င်များအတွင်း တစ်ဦး
ထက်ပိုသော လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၅.၀၆) ဖြစ်ပြီး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် များအတွင်း ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၄.၃၁) ဖြစ်သည်။ ဤစာရင်းဇယားများကို ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သော “အစ္စလာမ်မှ ဇနီးတစ်ဦးထက်ပိုသော လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း (၀ါ) မယားပြိုင်ထားခြင်းကို အဘယ်ကြောင့် ခွင့်ပြုထားရပါသနည်း´´ ဟူသော အချက်ကို ဆွေးနွေးကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်တစ်ခါ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ၊ ကျမ်းပို ဒ် (၃) တွင် “မိမိတို့ နှစ်ခြိုက်သော (အခြား)အမျိုးသမီးများအနက် (ယောက်ျား တစ်ဦးလျှင်) မိန်းမနှစ်ယောက်စီနှင့် ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် မိန်းမ သုံးယောက်စီနှင့်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် မိန်းမလေးယောက်စီနှင့် ဖြစ်စေ ထိမ်းမြားကြကုန်။ တဖန် အကယ်၍ အသင်တို့သည် (မိန်းမ တစ်ယောက်ထ က်ပို၍ ထိမ်းမြား ရာတွင်) တရားမျှတမှုကို
ပြုနိုင်ကြမည်မဟုတ်ဟု စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ကြ
ပြန်သော် (ဇနီးမိန်းမ) တစ်ဦးတည်းနှင့်ပင် (တင်းတိမ်ကြရမည်)။´´ (၄း၃)
ထို့ကြောင့် `တစ်ဦးတည်းကိုသာ လက်ထပ်ပါ´ ဟူသော စကားသည် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် တစ်အုပ်တည်းတွင်သာ ဖော်ပြထားသော ဖော်ပြချ က်ဖြစ်သည်။ အခြားမည်သည့် ဘာသာရေးကျမ်းဂန်တွင်မှ ညွှန်ကြားထားခြင်း
မရှိပါ။ အစ္စလာမ်မပေါ်ထွန်းမီ အချိန်ကာလက အာရေးဗီးယားကျွန်းဆွယ်ရှိ အာ ရဗ်လူမျိုး ယောက်ျားများသည်
ဇနီးအများအပြား ယူလေ့ ရှိသည်။ အချို့သောသူများတွင် ဇနီးဦးရေ ရာချီ၍ပင် ရှိတတ်သည်။ အစ္စလာမ်မှဇနီးများယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင့်ဆုံး ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သော `(၄) ဦး´ ကို သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သင့်အနေနှင့် ဇနီးတစ်ဦးထက်ပိုယူပါက ထိုနှစ်ဦး၊ ထိုသုံးဦး၊ ထိုလေးဦးအကြားတွင် တရားမျှတမှုနှင့် ဆက်စပ်မှုပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့မဆက်ဆံနိုင်ပါက တစ်ဦးထဲသာ လက်ထပ်ပါ။ ထိုအမျိုးသမီးကဏ္ဍ၊ ကျမ်းပိုဒ် (၁၂၉)၌
ထပ်၍ ညွှန်ပြထားသည်။ “ထိုမှတပါးတုံ အသင်တို့သည် (မည်မျှပင် တရားမျှတစေရန်) ဆန္ဒထား ရှိကြသော်လည်း (မိမိတို့၏ တဦးထက်ပိုသော) ဇနီးမိန်းမတို့၏ စပ်ကြားဝယ(် အဘက်ဘက်မ)ှ တရားမျှတအောင် အလျင်းပြုနိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။´´ (၄း၁၂၉)
ထို့ကြောင့် ဇနီးတစ်ဦးထက်ပို၍ ယူခိုင်းခြင်းကိစ္စမှာ ချွင်းချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စည်းမျဉ်း ဥပဒေသမဟုတ်။ များစွာသော လူပုဂ္ဂိုလ်များမှ `အစ္စလာမ်မှ ယောက်ျားများကို ဇနီး တစ်ဦးထက်ပိုပြီး ဇနီးလေးဦးထိ မဖြစ်မနေယူရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည် ဟု ထင်မြင်နေကြသည်။
အစ္စလာမ်တွင် လုပ်ရန်နှင့် မလုပ်ရန် အမျိုးအစား (၅)မျိုး သတ်မှတ်ထားသည်။
(၁) بجاولا “ မလုပ်မနေရတာဝန် ´´
(၂) بحتسملا “ ထောက်ခံသည်။ အားပေးသည်။´´
(၃) لالحلا “ ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်။´´
(၄) هوركمكلا “မထောက်ခံ အားမပေးပါ။´´
(၅) مرحملا “တားမြစ်ပိတ်ပင်သည်။´´ တို့ဖြစ်သည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၊ တမန်တော်မြတ် ( ملس و هيلع هللا يلص ) ၏ ဟဒီးဆ်သြ၀ါဒများ၏ မည်သည့် နေ
ရာတွင်မှ `ဇနီး တစ်ယောက်ထက်ပို၍ လက်ထပ်ထိမ်ြး မားသူသည် ဇနီးတစ်ဦးတည်း လက်ထပ် သူထက် ပို၍
သာလွန်ကောင်းမွန်သော မွတ်စ်လင်ဖြစ်သည´် ဟု ရေးသား ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် အစ္စလာမ်မှ အဘယ်ကြောင့် ဇနီးတစ်ဦးထက်ပို၍ လ က်ထပ်ခွင့်ပြုရသည်ကို ယုတ္တိဗေဒ
နည်းကျကျ ဆန်းစစ်ဝေဖန်ကြည့်ကြပါစို့။ သဘာဝတရားအရ ယောက်ျားကလေးများနှင့် မိန်းကလေးများသည်
တူညီသော အချိုးအစား နှင့် မွေးဖွားလာခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဆေးသိပ္ပံမှ ပြောကြားသည့် အချက်မှာ သန္ဓေ
သားအဆင့်တွင်ပင် မိန်းကလေးသန္ဓေသားသည် ယောက်ျားလေးသေ န္ဓသားထက်ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိ၍ ပို၍
အားကောင်းသန်မာသည်။ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးပြုလေ့လာထားသော အသိပညာ
ဗဟုသုတအရ မိန်းကလေးများသည် ယောက်ျားလေးများထက်ပို၍ ခုခံအားကောင်းပြီး၊ ရောဂါများနှင့် ပိုးမွှား
များကို ပို၍ခုခံနိုင်စွမ်း ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေး အရွယ်တွင်ပင် ယောက်ျားလေး အချိုးသည် မိန်းကလေး
အချိုးထက်ပို၍နည်းသည်။ ကလေးအဆင့်တွင်ပင် ယောက်ျားများထက် မိန်းကလေးများ၏ ကျန်းမာရေး အဆင့်
စစ်ဖြစ်ပွားသောကာလ၌ဆိုလျှင် ယောက်ျားများသည် မိန်းမများထက်ပို၍ အသတ်အဖြတ်ခံရပါသည်။ ယခု
လောလောဆယ် ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲများ အထူးသဖြင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ပွဲ
တွင် လူပေါင်း (၁.၅) သန်းကျော် သေဆုံးခဲ့ရပြီး ၎င်း တို့အနက် အများစုမှာ ယောက်ျားများဖြစ်သည်။ စာရင်း
ဇယားများအရ မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုနှင့် စီးကရက်သောက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူများတွင် ယောက်ျား
ဦးရေမှာ မိန်းမဦးရေ ထက်ပိုများသည်ကို တွေ့ရ၏။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မိန်းကလေးဦးရေမှာ ယောက်ျား
အာရှနှင့် အာဖရိကနိုင်ငံအချို့အပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ယောက်ျားကလေးဦးရေသည် မိန်းကလေးဦးထက် ပို
များသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိန်းကလေးသန္ဓေသား ဖျက်ချမှုမှာ နှစ်စဉ် နှစ်
တိုင်း တစ်သန်းကျော် အထက်၌ရှိသည်။ မိန်းကလေးကို ပဋိသန္ဓေဆောင်သည်ဟုသိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သ
န္ဓေသား ဖျက်ချတတ်သော မိစ္ဆာဓလေ့ဆိုးကြီးကြောင့် မိန်းကလေး ဦးရေမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနည်းပါးလာရပြီး၊
ကျားဦးရေများလာရခြင်းဖြစ်သည်။ (သို့မဟုတ်) မိန်းကလေး သန္ဓေသားကို ဖျက်ချတတ်သည့် ဓလေ့ဆိုးကြီးကို
ပယ်ဖျကပ် စ်နိုင်ပါက အခြားနိုင်ငံများမှာကဲ့သို့ပင် ယောက်ျားလေးဦးရေမှာ မိန်းကလေး ဦးရေထက် ပိုနည်း နေ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် မိန်းမဦးရေသည် ယောက်ျားဦးရေထက် (၇.၈) သန်း ပိုနေပါသည်။ နယူး
ယောက်မြို့ တစ်မြို့တည်း၌ပင် ယောက်ျားလေး အရေအတွက်နှင့် ယှဉ်လျှင် မိန်းကလေးအရေအတွက်သည်
တစ်သန်းကျော် ပိုနေပါသည်။ နယူးယောက်မြို့တွင် နေထိုင်လျှက်ရှိကြသော ယောက်ျားဦးရေ၏ သုံးပုံ တစ်ပုံ
မှာ မိန်းမလျှာများ ဖြစ်နေကြသည်။ အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ လိင်တူ ဆက်ဆံသူဦးရေမှာ နှစ်ဆယ့်ငါးသန်း
မက ရှိနေပါသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်မူ မိန်းမဦးရေသည် ယောက်ျားဦးရေထက် (၄) သန်းကျော် ပိုနေပြီး၊ ဂျာမနီ
နိုင်ငံတွင်မူ (၅) သန်းကျော်၊ ရုရှားနိုင်ငံအတွက်မူ (၇) သန်းကျော် ပိုများနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တစ်ကမ္ဘာ
လုံး၌ ရှိကြသည့် ယောက်ျားနှင့် မိန်းမဦးရေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် မိန်းမဦးရေ သန်းပေါင်းမည် မျှ
ပိုများနေမည်ကို အလ္လာဟ်အရှင်တစ်ပါးတည်းသာ သိရှိတော်မူနိုငမ် ည် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ညီမသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရှိသော အပျိုကြီးတွေထဲမှ တစ်ယောက်ဟု ဆိုကြပါ
စို့။ အကယ်၍ ယောက်ျား တိုင်းမှာ ဇနီးမယားတစ်ဦးကျစီ ရှိနေလျှင်တောင်၊ အမေရိကန်ပြည် တစ်ပြည်တည်း
တွင် ယောက်ျားရစရာ လမ်းမရှိမည့် မိန်းမသားဦးရေသည် သန်းသုံးဆယ်ကျော်နေပါသည်။ သူမတို့အတွက်
ရွေးချယ်စရာလမ်း နှစ်သွယ်သာလျှင် ကျန်ပါတော့သည်။ မိန်းမရှိပြီး သား ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် လက်
ထပ်လျှင် လ က်ထပ်၊ ဒါမှမဟုတ်လျှင် အများပိုင် ပစ္စည်းလုပ်ချင်လုပ် စသည့် ဤလမ်းနှစ်သွယ်သာလျှင် ရှိပါ
တော့သည်။ တတိယ ရွေးချယ်စရာ လမ်းကြောင်းမရှိချေ။
ကျွန်ုပ်ကိုယုံပါ။ အထက်ဖော်ပြပါ ပြဿနာကို မွတ်စ်လင်မ်မဟုတ်သူ ယောက်ျားသားများကိုတင်ပြ၍ ၎င်းတို့၏
အပျိုကြီးညီမ၊ အစ်မများအတွက် ဘယ်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ကြမည်နည်းဟု မေးခွန်းမေးကြည့်ပါ။ မည်သူတစ်ဦး တစ်
ယောက်ကမျှ အများပိုင်ပစ္စည်းလုပ်ဖို့ကို လိုလားကြလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ အချို့ တော်သောပုဂ္ဂိုလ်များကတော့
၎င်းတို့၏ ညီမ၊ အစ်မများကို အပျိုစင် (အပျိုကြီး) အဖြစ် နေစေမည်ဟု ဆိုကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကို ယုံပါ။ ဆေး
သိပံ္ပ၏ တွေ့ရှိချက်အရ ယောက်ျားတစ်ယောက် (သ)ို့ မိန်းမတစ်ယောက်သည် သူတို့ရဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး
အပျိုစင်၊ လူပျိုစင်အဖြစ် မနေနိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှ ဟော်မုန်းများသည် နေ့
စဉ်နဲ့အမျှ လှုံ့ဆော်နေပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် တရားမ ၀င်သော လိင်ဆက်ဆံမှု (သို့) လိင်
ဖောက်ပြန်မှုများ ကျူးလွန်ရန်၊ လိင်နှင့် ဇိမ်ခံမှုပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
တရားကျင့်ရန် ဟိမ ၀န္တာတောအတွင်းသို့ ၀င်သွားကြသော သူတော်စင်၊ သူတော်ကောင်း အချို့ကလွဲ၍ ကျန်
သောလူများသည် မည်သည့်အရာများကို ပြုကျင့် ကြပါသနည်း။ သင်သည် ဖောက်ြ ပန်သူများမှ အဘယ်သို့
နေထိုင်သွားကြပါသနည်း။ မည်သည့်အရာများ ပြုလုပ်ကြပါသနည်း။ ဆိုသည့်အချက်ကို တွေ့ရှိရပေမည်။
အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ ခ ရစ်ယာန်အသင်းတော်တစ်ခု၏ လက်အောက်၌ရှိသော မယ်သီလရှင်
များနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးများအတွင်းမှ အများစုသည် တရားမ ၀င် လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် လိင်တူဆက်ဆံခြင်း ဆို
သော လုပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်နေကြကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးအဖြစ် နေထိုင်မည်
ဆိုသည်ကား မဖြစ်နိုင်ချေ။ (မှတ်ချက်- လူမျိုးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအရ မိမိတို့ကိုယ်ကို အပျိုစင်၊ လူပျိုစင်များအဖြစ်
ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြသော သူများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ) ထို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းမှာ သင်သည် ဇနီးရှိ
ပြီးသား ယောက်ျားတစ်ဦးကို လက်ထပ်ဖို့သာဖြစ်သည်။
ဘာသာပြန်ဆိုသူ :: ဆရာမကြီးဒေါက်တာလှလှဝ င်း
ပို့စ်ကော ကွန်မင့်တွေကော ဖတ်လို့မ၀ဘူး။
ဒါပေမယ့် nicolus agral – အဲဒီ နာမည်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဘယ်လိုခေါ်လို့ရလဲ မသိဘူးနော်။ အသံဘယ်လိုထွက်သလဲဟင် ။
နီကိုလတ်အဂ္ဂရယ် ခေါ်ပါတယ် မမ…